adfadmin | The official site for MXG Abdibashir
Ina Cigaal: Anaw taliya Maanddeeq Asalaama calaykumWaxad moodaa inay bilaabantay tartamiddii madaxnimada ee Maandeeq. Waxad moodainuu nin waliba taagtii is muujinayo, kuwa kalena uu tamartii nusqaaminayo. Waxshalay iska caadi ahaa, ayaa maanta xasaasi noqday....
Helee bal maxaan hayaaba 2003-06-26Hoheey maalmaha badhkoodHabeenka ayaa ka rooneMaxaan juun uuga heesi? Halkay i dhigtaan arkaayeMaxaan hambalyiyo bogaadinDadkayga u soo hibayn ba? Gumaysi markuu i heerayMarkuu heeryada i saaraykuwii heegada u fuulayInay hudiyaan...
Cabdilqaadiroow guul Allee roobka gabadhleeyeyEe guri Sanaagiyo ka da´hay gobolladii hawdkaGallad weeye eebuhu markuu goosto bixiyaayewaase dayr gabaabsiday hadeer goorta uu yimiyeGudban waa bishii loo yiqiin gacallehaygooweGadaal waxa ka raacaana waa gubane...